Waxaan ka wada hadlaynaa sidii aad u fog xakameeyo VLC oo aan wax barnaamijyadooda on your computer (Windows iyo Mac) ee qaybtan ee maqaalka. Halkan waa tallaabooyinka ku lug.
Qaybta 1aad: Sida loo Remote Xakamee VLC aan App
Qeybta 2: Sida loo Remote Xakamee VLC la VLC Remote
Qeybta 3: Waa maxay VLC Remote
Qeybta 4: VLC kale oo Remote
Talaabada 1: Marka hore, awood Media VLC ka Player ee HTTP interface
• Helitaanka goobaha VLC - Dul VLC Menu> Tools> Waxa aad rabtid
• Dooro radio button All bidix ee hoose ee shaashadda, in tusi doono oo dhan goobaha u VLC Media Player (by default VLC kaliya muujinaysaa inta badan la isticmaalo goobaha)
• U tag bogga doorashada Main Interfaces - Iyada oo ikhtiyaarka u Interfaces ballaadhiyey, dooro Main Interfaces
• Hubi doorasho Web ah - Tani waxay hadda ku tusi doonaa http sanduuqa qoraalka hoose
Talaabada 2: Calan sirta
• Hadda, doorto ikhtiyaarka Lua siiyo dhinaca gacanta bidix iyo qortaa erayga sirta ah sida ku cad shaashadda hoose
• Waxaan ku talinaynaa in aad isticmaasho password default ah sida 'vlcremote', si fog ugu xiri doona si toos ah adiga oo aan u baahan in ay mar kale ku qor in aad eraygaaga sirta ah marka xigta
• Dooro Save si uu u badbaadiyo, kuwaas oo Dooratay idinkaa iska leh
• Oo tago VLC in ay furto
Talaabada 3: ha VLC iyada oo aad brannmur
Marka mar kale bilaabay VLC, Windows weydii laga yaabo in aad si loo xaqiijiyo in aad rabto in aad u xiraan ama, dooran tubada. Tanu hadda oggolaan in ciyaaryahan warbaahinta in ay la xiriiraan Qalabka telefoonada gacanta (iyo qeybsanaan ku xigeenka). Haddii aadan arki heegan ah sida ku xusan markaa waa in aad gacanta ku sameeyo nidaamka si ay u oggolaadaan VLC Media Player iyada oo aad brannmur. Fadlan, raac talaabooyinkan si ay u awoodaan si ay u gaadhaan in.
• Fur Panel Control of your computer (Start> Control Panel)
• Nooca brannmur sanduuqa raadinta iyo saxaafadda gala
• Dooro fursad u ogolow barnaamij dhex brannmur Windows
• Hubi in sanduuqa ku xiga VLC labada shabakadaha guud iyo kuwa gaarka ah waa la hubiyaa
Taasi waa! Hadda, your computer diyaar u yahay inuu la hago.
Qeybta 2: Sida loo Remote Xakamee VLC la Remote VLC
Si aad u awoodo in aad isticmaasho Remote VLC si loo xakameeyo VLC Media Player, waa in aad u qabtaan tallaabooyinka soo socda si sax ah.
Talaabada 1: Isku diyaarinta your computer
Ka hor inta ku rakibidda app, waxaad u baahan doontaa in marka hore la sameeyo isbedela yaryar ee caadiga ah VLC Media Player in la geliyo on your computer si loo ha phone ogaado VLC si sax ah.
• Run VLC iyo dooro Tools> Waxa aad rabtid. Markaas, dooro oo dhan sida u qabo qaybta Show ah.
• Tani waxay hadda furi doonaa qaybta goobaha sare u VLC. Riix interface> Main Interfaces ka dibna hubi ikhtiyaarka Remote interface gacanta.
Talaabada 2: Remote VLC Dejinta
• Ka dib markii ay u fidinno VLC on your computer sida kor lagu sharaxay, waa in aad hadda dejisan iyo rakibi Remote VLC ku saabsan qalabka telefoonada gacanta, Kuwa soo socda waa la xiriiro si ay u soo bixi app.
• Marka app la rakibo, abuurtaan VLC on your computer si app waa awooda inay shaqeeyaan.
• Burcad VLC app ee Remote on qalab aad hadda, waa in hadda si toos ah u soo qaado magaca file video in la ciyaaray on your computer ah.
• Haddii app uusan awoodin in uu si toos ah loo ogaado your computer sabab qaar ka mid ah, markaas doono inaad gacanta xiriirin cinwaanka IP your computer ee.
• Waayo, Menu la xusho oo Settings.
• Under jeegga menu Settings iyo in la hubiyo in aad ku jirto shabakadda wireless guriga. Marka xiran shabakadda wireless guriga, dooro dar server VLC.
• Hadda, nooca in cinwaanka IP (tusaale ahaan 193.169.2.201) iyo Port ay ka baxaan sida caadiga ah 8080.
• Waxaa aad u tagto, hadda waa in aad la xiran codsiga your computer ee VLC.
Qeybta 3: Waa maxay Remote VLC
Remote VLC jirsado telefoonka soo galay gacanta fog u VLC media player oo kuu oggolaanaysa in aad dib u fadhiisan, nasato iyo wax ka kursi fudud xakameeyo.
Remote VLC ayaa aad u fudud in ay isticmaalaan interface oo dhan goobaha aasaasiga ah waxaa laga heli karaa interface ugu weyn laftiisa. Waxaad heli kartaa kuwa soo socda:
• Screen Full
• kontoroolha Volume
• Magaca faylka
• Raadso Settings
• Marka aad riix badhanka Browse Media, waxaa lagu daahfuri doonaa browser file kuu oggolaanaysa in aad aragto oo dhan files / fayl on your computer ah. Xusuusnow in tani Media VLC ka Player waa in la socda on your computer.
• Waxaad sameyn kartaa gal gaar ah ay ku jiraan sida folder Home oo dhan aad warbaahinta. Waayo, kanu, jaraa'id si fudud u dheer button Home aad tan iyo markii aan fariin Home qarka u saaran inay [folder name].
• Waxaad hadda ka ciyaari kara file kasta oo warbaahinta la jaan qaada VLC on your computer.
Qeybta 4: kale oo Remote VLC
1. Remote Midaysan
Remote Midaysan jirsado qalab Android aad galay WiFi / a Bluetooth hago dhammaan barnaamijyada ka on your computer Windows.
Suurto gashay mid ka mid ah si uu ugu tartamo iyo filimada gacanta / music on your computer, ka fog.
Waxaa ku biiray qalab Android la Desktop KDE ah. Waa inaad soo bixi version desktop-ka iyo sidoo.
App kale u jeesta telefoonka smart galay WiFi hago, waxa aad furan kartaa browser internet-ka oo uu dedeg bogagga aad rabto in aad soo booqato, u isticmaalaan ciyaaryahanka music ama warbaahinta xarunta oo aan si toos ah u shaqeeya aad PC ama laptop.
5. Control Remote u VLC
Waa codsiga iPhone / iPad kuu oggolaanaysa in aad xakameeyo Media VLC ka Player badan la xidhiidha WiFi ah, meel fog.
> Resource > VLC > Sida loo Remote Xakamee VLC